Sida loo sawiro sawirrada - Talooyin iyo tabaha ragga qaabka leh | Ragga Stylish
Qaado sawir, sawir dherer buuxa, ama 'sawiro' waa habka aan isugu muujinno munaasabad gaar ah ama sii sawirkaas wajigayaga ugu fiican shabakadaha bulshada. Haddii aad ka mid tahay dadka jecel inay sawiro la galaan, halkan waxaan ku siineynaa furayaasha ugu fiican si aad u ogaato tabaha ugu fiican
Waxay umuuqataa in haweenku aysan wax dhib ah kuheynin sameynta, laakiin runta ayaa ah in inbadan oo kamid ah ay raadiyaan khiyaamadooda oo ay kudayacaan qadarka daqiiqadaha lagu qaatay sameynta sawirradooda. Xaqiiqdii waxaad ka mid tahay kuwa aan wax fikrad ah ka haysan sida wax loo sawiro, haddii ay tahay inaad dhinacaaga ka sameyso, lugahaaga ka gudub ama meesha aad gacmahaaga dhigeyso. Haddii shaki badan kugu jiro, sii wad akhriska.
1 Isku soo sawiro si dabiici ah
3 Haddii aad rabto inaad qariso qaybo ka mid ah jirkaaga
4 Ciyaaraha jecel
5 Baro inaad u dhoolla caddeyso kamaradaha
Isku soo sawiro si dabiici ah
Habka ugu dabiiciga ah ee wax loo dhigaa waa goorma wejiga ama jirka wax qallafsanaan ah ma leh. Waxaa lagugula talinayaa inaad dhinacaaga istaagtid iyo wejigaaga u yara leexo isaga oo iska ilaalinaya in hoosku aanu ku badnaan meelaha ay tahay inaysan noqon oo wejiga daboolaya.
Waad wajihi kartaa ka dibna xoogaa u rogo jirka qiyaastii 45 darajo. Ragga aad bay u tahay inaad hesho xoogga gacmahaaga, inay ogaadaan in la daryeelo. Waad kala duwanaan kartaa sawirka hadaad ku sameyso xagal hoose, taasi waa, hoosta si aad u aragto sida muuqaalku u eg yahay. Beddel xaglaha iyo sida aad sawirka u qaadatid waxay kaa qaadi karaan wax lala yaabo oo aad jeclaan doontid natiijadiisa.
Muuqaalka dhoola cadeynta ayaa si aad u wanaagsan ula shaqeynaya kala-badhkan jirka, iyo meesha gacmaha waa laga gudbi karaa. Haddii aad jeceshahay inaad hore u baxdo oo aad dhoola cadeyso, waad sameyn kartaa gacantaada geli nooc dhar ah ama diid in la siiyo wax soo saar wanaagsan sawirka. Tusaalooyinka aan hayno, waa labo nin oo iska soo dhigaya iyagoo jaakadoodu dhabarka ku dhegan tahay.
Qaabkan loo dhigayo waa mid aad wax ku ool ah, uma baahnin inaan si ficil ah u fikirno sida loo dhigo gacmaha ama lugahaSababta oo ah qaabka ugu weyn ee aad korsato, tani waa sida qaabkeedu u xasilin doono. Jidadka ugu isticmaalka badan ee ragga u shaqeeya waa markay furayaan lugahooda, maadaama ay siinayso xoog iyo dabiici. Furitaanka gacmahaaga oo aadan u oggolaan inay si adag u dhegtaan waa muuqaal kale oo aan ahayn inuu maqnaado.
Haddii aad rabto inaad qariso qaybo ka mid ah jirkaaga
Haddii aad jeceshahay inaad qariso aag ka mid ah jirkaaga maxaa yeelay waxaad u aragtaa inuu yahay qayb dabiici ah ama laga yaabo inaad rabto inaad daboosho xoogaa cillad ah, waxaad had iyo jeer ku sameyn kartaa si dabiici ah xeelado qaarkood. Waxaad ku qaadan kartaa shay gacantaada iyo daboolo qayb ka mid ah wejigaaga ama kor u fiiri mid ka mid ah tallaalada si aan wajigaaga gebi ahaanba u muuqan. Ama sawir u muuqda mid weyn waa marka la sameeyo iftiinka dambe, halka silhouettes-ka lagu muujiyey madow oo gadaasha gadaal laga arkayo.
Tabaha kale ee aad codsan karto waa koob ama koob gacantaada ku qaado oo ku waraabi, Tani waxay qarin doontaa qayb ka mid ah wejigaaga. Ama markaad calool leedahay oo aad rabto inaad qariso. Xaaladdan oo kale waad awoodi kartaa sawir kaa qaado is rogroga, ama hadday tahay xagaa oo aad barkadda ku jirtid quusin jirkaaga barkadda geeskeeda iyo sawir kaliya jirka badhkiis.
Ragga xiisaha leh, doonaya inay la wareegaan adduunka iyo kuwa jecel isboortiga, sawirro cajiib ah ayaa laga qaadi karaa. Waxaa jira muuqaallo aan tiro lahayn iyo dib-u-qaabeyn aad dib ugu abuuri karto boodboodka ama sameynta nooc ka mid ah jimicsiyada. Haddii aad ku jirtid qolka jimicsiga, waa hab fiican oo aad u sameyso sawirro wanaagsan, dharkaaga isboortiga iyo shey aad u isticmaasho inaad ku sameyso isboortiga aad ugu jeceshahay. Had iyo jeer isticmaal taasi waa mid dabiici ah, oo leh qabasho iyo muuqaal culus, inkasta oo dhoollacaddayntu aysan badnayn.
Baro inaad u dhoolla caddeyso kamaradaha
Waxaan horey u ognahay in dhoola cadeyntu ay tahay mid adag oo ugu adag ee si dabiici ah lagu gaaro. Dhoolacaddaynta weyn waxay abuuri kartaa qaab lagu qoslo, laakiin haddii aadan isku dayin ma ogaan doontid. Sida ugu fiican ee inaad dhoola cadeyso waa inaad si dabiici ah u sameyso, adigoon ka fikirin inaad fiirineyso ama iska dhigeyso kamarada horteeda.
Maxaa dhici kara haddii dhoolla caddayntu qasab noqoto? In dhamaadka muuqaal aan dabiici ahayn la dhisay, qaabka afku wuxuu noqon karaa mid aad u ballaaran, dhabannada ayaa barari doona oo indhaha ayaa murugoon doona. Hal dariiqo oo aad had iyo jeer awood ugu yeelan karto inaad sawir ka sameyso ayaa ah ku dhoola cadee muusikadaada muraayada horteeda. Waxaad isku dayi kartaa inaad nasato wajigaaga iyo afka fur inyar. Waa inaad u ogolaataa bushimaha sare inay sawiraan qalooca ilkaha kore sidaasna waxaad ku maamuli doontaa inta ilko ee aad rabto inaad muujiso. Haddii aad weli xiiseyneyso sida wanaagsan ee aad uga dhex muuqan karto sawirrada, naga aqri halkan qaybtan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Sida loo sawiro